Izindaba - Zonke izimpompo zepulasitiki kanye ne-trigger sprayer, ukuze iphampu yokufafaza nsuku zonke kanye ne-trigger sprayer iphinde isetshenziswe kabusha
Ibhodlela le-plastic sprayer
Ibhodlela lepompo legwebu
Lotion futha ibhodlela
Gcoba ibhodlela lesembozo
Isifutho senkungu esihle
Uqalo noma isipuni sokhuni
Tube ingilazi ibhodlela
Yonke ipompo yokufafaza epulasitiki kanye ne-trigger sprayer, ukuze iphampu yokufutha yansuku zonke ne-trigger sprayer iphinde isetshenziswe kabusha
Ukuthuthuka komphakathi wesintu akunakwehlukaniswa nemvelo kanye nemvelo. Ngenkathi sinqoba umhlaba futhi sithuthukisa umphakathi futhi sithola ukukhula komnotho okusheshayo, sihambisana nokuphangwa kwemvelo kanye nokucekelwa phansi kwemvelo, okuyingozi enkulu empilweni nasentuthukweni yabantu. Ukwenza ngcono imvelo ngemvelo kanye nokubona intuthuko eqhubekayo yomphakathi wesintu kuyizinkinga eziphuthumayo nemisebenzi eyinhloko ebhekene nabantu bazo zonke izinhlanga emhlabeni wonke. Intuthuko eqhubekayo intuthuko engagculisi kuphela izidingo zabantu besikhathi samanje, kepha engalimazi ikhono lezizukulwane ezizayo ukuhlangabezana nezidingo zabo. Luhlelo olungehlukaniseki olungagcini ngokufeza inhloso yokuthuthuka komnotho, kepha futhi oluvikela imithombo yemvelo nemvelo efana nomoya, amanzi ahlanzekile, ulwandle, umhlaba kanye namahlathi abantu abathembele kuwo ukuze baphile, ukuze izizukulwane ezizayo zikhule ngokuzinzile futhi uphile futhi usebenze ngokuthula.
Izinto zokupakisha zepulasitiki zezidingo zansuku zonkezivame kakhulu empilweni yethu yansuku zonke. Banokusetshenziswa okuhlukahlukene nenani elikhulu. Kungashiwo ukuthi ngamunye wethu uxhumana nabo ngaso sonke isikhathi, futhi amaphampu wokufafaza inhlamvu yesifuthoungomunye wabo. Isakhiwo sepompo yendabuko yesifutho yaziwa kahle yiwo wonke umuntu, esakhiwa ikamelo lepompo, intambo yentambo, ibhola lengilazi, ipiston, ikhanda labezindaba nezinye izinto. Amaphampu wendabuko adinga ukuqaqa futhi akhethe iziphethu zocingo, amabhola engilazi, nezingxenye ezahlukahlukene zepulasitiki ngemuva kokusetshenziswa. Inqubo yokuphinda isebenze kabusha inzima kakhulu, futhi izindleko zokuphinda zisetshenziswe nazo ziphakeme kakhulu. Ngisho izindleko zokuphinda zisetshenziswe zidlula inani lomkhiqizo, kusetshenziswa amaphampu amaningi wesifutho wendabuko. Ngemuva kwalokho, ngeke iphinde isetshenziswe futhi igeleze iye endaweni yemvelo lapho sihlala khona, ibangele ukungcola okumhlophe okukhulu.
Ukunakekela umhlaba, ukugcina imvelo, nokuvikela imvelo, thina njengomkhiqizi kufanele sithathe ingxenye yomthwalo wemfanelo, ikakhulukazi owakha impahla yethu yokupakisha, kufanele sihlanganyele ngenkuthalo nesenzo sokunqanda umthombo wokungcola okumhlophe emthonjeni, futhi ngempumelelo futhi uthuthukise kahle ukuthengiswa kokuphindwa kusetshenziswe. Yonke ipompo yesifutho sepulasitiki futhi inhlamvu yesifuthoungomunye wemikhiqizo exazulula inkinga yokuphinda isebenze kanzima. Izinzuzo zeyonke ipompo lepulasitiki futhi konke okufafaza ipulasitiki zimi kanje:
1. Inenhlanzeko futhi iphephile, zonke izingxenye zingabunjwa ngomjovo ngezinto zepulasitiki ezisebangeni lokudla, bese zihlanganiswa ngqo futhi zivalwe. Uma kuqhathaniswa namaphampu wendabuko, igwema ngempumelelo ukungcoliswa kwezinto zokuhamba njengezinto zemithombo, amabhola engilazi, nokungcola kwensimbi okusindayo kweziphethu zocingo.
2. Ukusebenza, ukuqina nokuqina, amaphampu wesifutho wendabuko kunzima ukugwema izinto ze-polyoxymethylene (POM) ngenxa yezinkinga zesakhiwo. I-POM kulula ukusabela ngamakhemikhali afana ne-iodine, kanti amazinga okushisa aphezulu nawo angakhipha amagesi ayingozi kubantu.Wonke amaphampu epulasitiki ingasebenzisa i-PP, i-PE nezinye izinto ezinempahla ebonakalayo ezinzile ukugwema ngempumelelo izinkinga ezingenhla.
3. Imvelo futhi isebenze kabusha, zonke izingxenye ze- yonke-plastic spray futhaizingxenye zepulasitiki, kungasetshenziswa zonke izinto ezihambisana nepulasitiki, futhi uhlobo olufanayo lwezinto ezisetshenzisiwe zepulasitiki zisetshenziswa ngangokunokwenzeka, futhi ukuvuselelwa kabusha kungachotshozwa ngqo futhi kube granulated. Kugwema izinqubo eziyinkimbinkimbi nezisicefe njengokusebenzisa kabusha, ukuqaqa, ukukhetha nokuhlukanisa, futhi ngokuxazulula inkinga yokusetshenziswa kabusha okunzima.
IShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd. I-RB PACKAGE iphakamisa ukuthi sisebenzisane ukuqeda ubunzima bokuphinda kusetshenziswe kabusha izidingo zansuku zonke zokupakisha kusuka emthonjeni, ukuze izinto zokupakisha esizikhiqizayo zingagobhozi ziye emvelweni futhi zibe yimithombo yokungcola kwemvelo ngemuva kokusetshenziswa, futhi kahle futhi iRainbow Package ithuthukise ngempumelelo kabusha ikhebula lezidingo zansuku zonke zokupakisha izinto! Thuthukisa ukuthuthukiswa okuqhubekayo, okunempilo nokuqhubekayo komkhakha wepompo wezinto zokupakisha! I-Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ingumkhiqizi, iphakethe le-rainbow lase-Shanghai Nikeza ukupakisha okukodwa kokumisa.
I-Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd, Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma i-pricelist, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana namahora angama-24.
Ucingo:Isakhiwo 4, No 1008, empumalanga Jiefang Rd, Isifunda iFengxian, eShanghai City, eChina
© Copyright - 2010-2021: Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.